Arduino Yún, bhodhi rekupinda muInternet reZvinhu zvakasununguka | Mahara emahara
Arduino Yún, bhodhi rekupinda muInternet reZvinhu zvakasununguka
Iyo Internet yezvinhu kana inozivikanwa zvakare seIoT yakashandura hunyanzvi hwenyika uye yasvikawo mazhinji emapurojekiti edu (tingave tichida kana kwete). Ndokusaka vashandisi vazhinji vari kutsvaga bhodhi rinogadzirisa zvirongwa zvavo, izvo zvisingadhuri uye zvakare zvinobatana neInternet pasina kushandisa kiyi isina waya kana kadhi yenetiweki. Kune vazhinji, iyo yekupedzisira inogadzirisa nekukurumidza, asi hazvireve kuti inyanzvi kana inoshanda mhinduro.
Tichifunga izvi, timu ye Iyo Arduino chirongwa chakagadzira bhodhi iyo yakanangana neInternet yezvinhu. Bhodhi iri rinonzi Arduino Yún.
1 Chii chinonzi Arduino Yún?
2 Ndeupi mutsauko uripo pakati paArduino Yún uye Arduino UNO?
3 Chii chinonzi Openwrt-Yún?
4 Nzira yekuwana sei iyo Arduino Yún kumisikidzwa?
5 Chii chandingaite naArduino Yún?
Chii chinonzi Arduino Yún?
Arduino Yún bhodhi kubva kuArduino Project. Izvi zvinoreva kuti dhizaini uye kugadzira kwayo kunogona kuitiswa pachedu kana neimwe kambani pamwe nekugona kushandisa dhizaini yayo kugadzira prototypes uye neangu ega mahwendefa. Panyaya yaArduino Yún, iyo yekupedzisira yaizove imwe nhanho, nekuti yakavakirwa pana Arduino Leonardo, ane simba bhodhi modhi kupfuura Arduino UNO.
Arduino Yún ane akafanana dhizaini uye mutungamiriri mumwe chete saArduino Leonardo, ndokuti, processor Atmel ATmega32U4. Asi, kusiyana naArduino Leonardo, Arduino Yún ane Atheros Wireless AR9331 mini-board, slot yemakadhi emicrosd uye yakakosha inonzi Linino.
Ndeupi mutsauko uripo pakati paArduino Yún uye Arduino UNO?
Tichifunga nezve izvo zvataurwa pamusoro, misiyano iri pakati peye Arduino Yún modhi uye modhi iri pachena Arduino UNO. Asi kune zvimwezve.
Kana iwe ukatarisa icho chinyorwa chatakaburitsa munguva pfupi yadarika, bhodhi reArduino harina zvinhu zvakawanda izvo mamwe mabhodhi akaita seRaspberry Pi anazvo, asi Arduino Yún haana.
Iyo nucleus inonzi Lininus inzvimbo inopa simba rakaringana ku vane kugoverwa kudiki kunonzi Openwrt-Yún. Kugoverwa uku kunoshandisa iyo Linux kernel uye zvimwe zvishoma zvishandiso zvinoita Openwrt inogona kuiswa pane chero chishandiso chine atheros board kana yakafanana.
Chii chinonzi Openwrt-Yún?
Panguva ino, zviri nyore kumbomira nezve izvo Openwrt-Yún uye kuti nei zvichikosha.
OpenWRT Iko kugoverwa kweGnu / Linux kunoenderana nechero router uye isina waya kadhi. Mune ino kesi, Openwrt-Yun inoshandurwa kugovera kuti iiswe paArduino Yún. Kugovera kunogara muLinino uye kunogona kuwedzerwa nekuda kweiyo slot yemakadhi emicrosd. Kugona kushandisa aya mashandiro, isu tinongofanirwa kubatana kubhodhi iri kure kuburikidza nessh uye kushandisa iyo yekuparadzira maneja maneja pamwe nezvimwe zvese zvishandiso.
Hazvina basa kutaura, kugovera uku iyo ichatipa isu mamwe epamoyo akangwara mashandiro ayo anayo sisitimu yekushandisa asi haina kufanana neRaspberry Pi bhodhi iyo inogona kushandiswa seye minicomputer kana pc yakare yatinogona kushandisa sevha kana chikamu cheboka.
Nzira yekuwana sei iyo Arduino Yún kumisikidzwa?
Kuti uwane iyo Arduino Yún kumisikidzwa, isu tinofanirwa kutora matanho maviri kufunga.
Isa madhiraivha kuti azivikanwe nePC neArduino IDE
Gadziridza iri kure interface yekubatanidza uye iyo "bhiriji" nhanho yezvirongwa zvemunhu kushandisa iyo isina waya interface.
Nhanho yekutanga yakakosha sezvo pane imwe nguva isu tichazoda kutumira zvirongwa uye data kuArduino Yún board. Kune izvi isu tinofanirwa chete gadza madhiraivha ebhodhi uyezve unomhanya Arduino IDE. Kana isu tine Arduino IDE paGnu / Linux, hapazove nedambudziko nedanho iri uye hatife takafanira kuita chero chinhu; kana tiine Windows, madhiraivha eiyo modhi pamwe nemamwe maArduino modhi achave akaiswa pamwe neArduino IDE, nekudaro kukosha kwekushandisa iyi IDE; Uye kana isu tine mac OS, hatifanirwe kuita chero chinhu kana tikashandisa Arduino IDE, asi kekutanga nguva patinobatanidza iyo Arduino Yún bhodhi kuMac yedu, iyo keyboard yekuisa wizard ichaonekwa, wizard yatichafanira kuvhara nebhatani dzvuku. Iri idambudziko rinoita serinoratidzwa mukati iyo yepamutemo webhusaiti yeArduino Yún.
Rimwe danho ratiri kufarira kuziva ndiko kubatana uye manejimendi yeArduino Yún Wi-Fi module. Kutanga tinofanira kusimbisa ndiro; izvi zvinokonzeresa kuti bhodhi riumbe wifi network inonzi Yún. Isu tinobatana kunetiweki iyi uye mu browser tinonyora kero http: //arduino.local Iri kero rinozovhura webhusaiti kubva kwatinogona kubata iyo nyowani network yakagadzirwa. Iro zita rekushandisa nephasiwedi yepaneru iri "arduino", izwi ratinogona kuchinja kana tapinda panhare.
Asi, kana tikashandisa Arduino Yun, chatichatsvaga ndechekubatanidza kune yeWi-Fi network uye kwete kugadzira yedu yega network. Kuti uite izvi, mupaneru rakavhurwa, pasi pane kudonhedza pasi nezvinhu zvekubatanidza kune chero netiweki yeWi-Fi, kunze kwemayunivhesiti network uye mamwe maratidziro akafanana anoshandisa maprotocol uye password software iyo. ita kuti zvibvirire (zvakadaro) kubatana nerudzi urwu rwemahwendefa.
Zvakanaka, isu tatoziva maitiro ekugadzira yako wega Wi-Fi network, batanidza kune imwe netiweki yeWi-Fi, asi ini ndinoshandisa sei kubatana uku nemamwe mabhodhi uye / kana zvirongwa?
Kwakanaka kwazviri isu tinofanirwa kushandisa iyo Bridge basa mukati mechirongwa chatinogadzira muArduino IDE. Basa rinotanga ne Bridge.begin (), basa rinotibvumidza isu kuti titaurirane neyakajairika basa uye isina waya basa reArduino Yún bhodhi.
Chii chandingaite naArduino Yún?
Nepurogiramu inodikanwa, tinogona kugadzira chero chinhu chehunyanzvi "chakangwara" nekuda kweArduino Yún board. Zvisinei, chinonyanya kushandiswa kushandisa bhodhi kuitira kuti gadget yakagadzirwa igone kuInternet uye kukwanisa kuishandisa kuburikidza nechimwe chigadzirwa senge smartphone, piritsi kana pc.
Vamwe vashandisi vakakwanisa kushandisa bhodhi seyakajairika network kadhi, asi isu tinofanirwa kutaura kuti kuita izvi kwakanyanya kuomarara uye mutengo webhodhi wakakwira kupfuura chero zvakajairika kadhi reinternet Vhura Mirayiridzo unogona kuwana fan fan yezvingaitwe naArduino Yún. Isu tinongofanirwa kunyora zita rebhodhi mune yekuchengetedza injini yekutsvaga uye akasiyana mapurojekiti anoshandisa iyi modhi ichaonekwa.
Arduino Yún ibhodhi rinonakidza uye rakakosha revashandisi vazhinji nekuti kusvika pakasvika kwake, chero munhu aida kubatanidza chirongwa chake kuInternet aifanira kutenga Arduino board pamwe newaya isina waya kana GSM inobvumidza kubatana. Mutengo wacho waive wakakwirira kudarika Arduino Yún uye zvakanyanya kuoma zvirongwa nezvimwe zvisingakwanisike. Arduino Yún anoruramisa zvese izvi uye anopa mukana wekugadzira akareruka uye akasimba gadget kupfuura zvino. Asi chirongwa chedu chinogona kunge chakakodzera kune dzimwe nzira dzakadai seRaspberry Pi Zero W. Chero zvazvingaitika, vese Arduino uye Raspberry Pi vanoteera maFree Hardware nongedzo uye zvinoreva kuti tinogona kusarudza bhodhi nemhinduro tisingaone chirongwa chedu chakakanganiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Arduino Yún, bhodhi rekupinda muInternet reZvinhu zvakasununguka
Mhoroi, Kubvumbi 24, 2018, ndiro iyi inoita kunge yakabviswa nemugadziri, zvinofungidzirwa nekuti haina kutevedzera chero mirau.
Chakandishungurudza ndechekuti yun's shield iri mukatalog.
Ini ndinosiya iyi link: https://store.arduino.cc/arduino-yun
Ndiri kutsvaga imwe nzira yeprojekiti yangu, ndingafarire chero mazano.
Kwazisai nekutenda kune iyo posvo.
Gadzira rako rako rekodhi remagetsi raunogona kuvhura musuwo wegaraji nekuda kweminwe yako